'रे' मा रुमल्लिएको निर्मला प्रकरण (#WhoKilledNirmala शृङ्खला ५)
28th November 2018, 07:23 pm | १२ मंसिर २०७५
महेन्द्रनगरबाट फर्केर उमेश श्रेष्ठ र सविन ढकाल-
'बम दिदी बहिनीलाई धेरै कुरा थाहा छ।'
निर्मला पन्तको हत्यापछिका धेरै घटनाका प्रत्यक्षदर्शी हुन् धनुष। महेन्द्रनगरमा लगाइएको कर्फ्यु अनि प्रहरीको गोली लागि एक किशोरको मृत्यु र अन्य कयौँ घाइते हुँदा यिनी प्रत्यक्षदर्शी थिए। यी सबै घटनाबारे धनुष जसरी स्पष्ट वर्णन गर्न सक्छन् निर्मला प्रकरणबारे आफैँ त्यति प्रष्ट छैनन्। 'सबै कुरा अरूको मुखबाट नै सुनेको हुँ। सबै जनाले 'रे' मात्र भन्छन्। यस्तै थियो भन्ने भेटेको चाहिँ छैन,' उनले भने।
‘बम दिदीबहिनीको घरमा भिआइपीका छोरा र एसपीका छोरा थिए रे। उनीहरुलाई ‘त्यस्तै’ अवस्थामा निर्मलाले देखिछिन् रे। अनि हत्या गरेको रे।'
त्यस्तै अर्को धेरै सुनिएको हल्ला थियो- ‘देउता चढ्नेकोमा हेराउन जाँदा निर्मलाको आत्माले 'त्यो दिन मेरी आमा बम दिदीबहिनीको घरमा आउँदा म भित्रै थिएँ, मलाई आँखामा पट्टी बाँधेर जिउसमेत बाँधेर राखिएको थियो' भनेकी थिइन् रे।'
३७ वर्षअघि नमीता,सुनीता,नीरा र चुडामणि हत्या प्रकरणको नसुल्झिएको रहस्यको अनुसन्धान गर्ने नाममा पनि तत्कालीन अञ्चलाधीशले यस्तै अन्धविश्वासी काम गरेको विवरण तत्कालीन सिडिओ सूर्यबहादुर सेन ओलीले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्।
‘कसरी मारे? त्यहाँ कसरी लगे? त्यो कसको घर हो? मार्नेहरू कस्ता र कोको थिए?,' अञ्चलाधीशले सोधे।
‘एउटा थानाको पुलिस अफिसर हो, नाम जान्दिनँ, अरूले सर भन्थे, एउटा त्यो पिउन, अरू ३ वटा गुण्डा हुन्, नाम जान्दिनँ' भन्दै फेरि रुन थाल्यो।
एसपी सोध्छन् – ‘पुलिस अफिसर कस्तो थियो? नचिनेका मान्छेसँग कसरी सम्पर्क भयो? त्यस दिन कहाँबाट त्यहाँ आयौ?'
‘मारेर फाल्न बोकेर लग्यो?'
‘के छुरी नै हानेको?'
हाम्रा साथी महेन्द्र बमले सुनाए, 'अहिले मात्रै हो यस्तो। पहिले त एसपीका छोरालाई नै शंका गर्थे।‘
महेन्द्रनगर बजारबाट करिब २ किलोमिटर पर नेपाली सेनाको २५ नम्बर बाहिनी पार गरेपछि निर्मलाको घर पुगिन्छ। त्यहाँका बासिन्दाहरु निर्मला प्रकरणमा खासै खुलेर बोलेको पाइँदैन। उनीहरू कसैलाई दोष लगाउँदैनन्। केवल एउटै कुरा भन्छन्- 'हत्यारा चाँडो पत्ता लागोस्।'
हामी पुग्दा निर्मलालाई न्याय माग्दै कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि निर्मलाका आमाबुबा २४ घन्टे धर्नामा बसेका थिए। धर्नामा पुग्ने सबैको एउटै भनाइ थियो, 'बम दिदी बहिनीलाई सबै कुरा थाहा छ। समातेर एक दुई लात हान्नुपर्छ, सबै भन्छन्। हामीलाई दिनुहोस् हामी ३ घण्टामा सबै ओकल्ने बनाइदिन्छौं।'
महेन्द्रनगर बजारमा अटो रिक्सा चलाउनेले राजेन्द्र बडुले सुनाए, 'बम दिदीबहिनी त आइमाई हुन्। तर, यहाँ घटना एसपीको छोरा र मेयरको भतिजाले गरेको भन्ने पनि हल्ला छ। बम दिदी बहिनीलाई समातेर केरकार गर्दा थाहा हुन्छ।'
उनलाई बम दिदीबहिनीलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको समेत थाहा रहेनछ भन्ने लाग्यो। हामीले भन्यौं, - 'अनि उनीहरुलाई त समातेका थिए नि त।'
उनले आक्रोशित हुँदै जवाफ फर्काए, 'समातेर नानी, मासु खाने कि के खाने भनेर मेजबानी गरेर राखेर सोधेपछि कसैले बताउँछ?’
निर्मलाको घर नजिकै भेटिएका दमाइ बाजेले 'बम दिदीबहिनीको घरसम्म एसपी मर्निङ वाकको लागि आउने गरेको सुनेको' बताए। आक्रोशित हुँदै भने, ‘अरु बाटो थिएनन्? किन आउनु त्यो बाटो!'
निर्मलाको छिमेकी एक महिलाले भनिन्, 'त्यो एसपी डोके रहेछ। दुनियाँ साथीसँग बुझ्याँ हुम्। मुख देख्दै रिस उठ्न्या।'
घटनाको प्रकृति हेर्दा सामान्य मानिसले पनि घटना बम दिदीबहिनीको घरसँग सम्बन्धित भएको थाहा पाउने उनको दाबी छ। उनी भन्छन्, 'यो घटनाको दोषी भनेको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त उच्च व्यक्तिको सन्तान वा उच्च व्यक्ति हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ।‘
काठमाडौँमा सुनेका कुरा, सामाजिक सञ्जाल र इमेलमार्फत् यही शृङ्खलाका पाठकहरुसँगको अन्तर्क्रियापछि निर्मला प्रकरणमा हामीले यी ‘रे’ धेरैले सुनेको र तथ्य खोजी गर्नुपर्ने ठानेका छौँ -
(यी प्रश्नहरुसित हामीले भेटेका तथ्यको विश्लेषणसहित हामी क्रमशः लेख्दै जानेछौँ। बम दिदीबहिनीहरुको बारेमा हामीले महेन्द्रनगर बजारमा र काठमाडौँमा जे सुन्यौँ, उनीहरुको घरमा पुग्दा के देखियो? छिमेकीहरु यी दिदी बहिनीको चरित्रबारे के भन्छन्? पहिलोपोस्टको #WhoKilledNirmala शृङ्खलाको अर्को भागमा)